Editorial Myanmar Gazette – အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » Editorial Myanmar Gazette – အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉
Editorial Myanmar Gazette – အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉
Posted by kai on Nov 1, 2019 in Editor's Notes, Myanmar Gazette |0comments
အောက်တိုဘာလကုန်ပိုင်းတွင် ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် တောမီး/ခြုံပုတ်မီးများဆင့်ဆက် လောင်သည်။ ကုန်းဖက်မှတွန်းတိုက်‌ဝှေ့ဝင်လာသော Santa Annaခြောက်သွေ့လေရူးသည်လည်း ထူးခြားပြင်းထန်လွန်းရကား အောက်တိုဘာတလအတွင်း၌ပင် ဧက၁သိန်းကျော် လောင်ကျွမ်းပြာကျပါသည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား၏ လက်ရှိပြဿနာဖြစ်သော အိမ်မြေရှားပါးပြတ်လတ်မှု့ စျေးမြင့်လွန်းမှုနှင့် အိမ်ခြေယာမဲ့တို့ဆင့်ပေါင်းလိုက်သောအခါ စွဲမြဲနေရန်မသင့်ပြည်နယ်အဆင့်ပင် သတ်မှတ်သူတို့ရှိလာသည်။
လက်တွေ့မှာမူ ကယ်လီဖိုးနီးယားသည် ကမ္ဘာရုပ်ရှင်အနုပညာ၏ဦးဆောင်-ဘီလီယန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစု ဟောလိဝုဒ်နှင့် Google, Yahoo!, Apple, Netflix, Facebook, eBay, Intel, Tesla စသည့် ထရီလီယန်‌-ဘီလီယန်ဒေါ်လာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ IoT, IT၏ မူလ စီလီကွန်ဗယ်လီ တည်ရာမြေပါ။ ကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုနှင့်တွက်လျှင် ယခုနှစ်တွင် UK ကိုကျော်လွန်၍ ကမ္ဘာပဥ္စမနေရာ စီးပွားရေးအင်အားကြီးဖြစ်သတည်း။ သို့ဆိုသော် စက်မှုလယ်ယာစွမ်းပကားကျန်ခဲ့ပါဦးမည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားအလယ်ပိုင်းတောင်ကြားတန်းလွင်ပြင်မြေ၏ စက်မှုလက်ယာသည် ဤမြေကမ္ဘာပေါ်တွင် အထုတ်နိုင်ဆုံးလည်းဖြစ်သတည်း။အမေရိကတနိုင်ငံလုံးထုတ်နိုင်စွမ်း၏ တ၀က်ကျော်မျှသော သီးနှံဟင်းသီးဟင်းရွက်အချို့ကို ဤမြေခံမှထုတ်လုပ်ကျွေး၏။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာတွင်ဥတုရာသီဆိုးအခံရဆုံး၁၀နိုင်ငံ စာရင်းတွင်သာပါသည်မဟုတ်၊ သမိုင်းကြည့်ပါကလည်း နှစ်၅၀၀၀+စီ ယဥ်ကျေးမှုသက်တမ်းရှိသော လူဦးရေ ဘီလီယန်ရှိနိုင်ငံကြီးနှစ်ခုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရှိလျှက်နှင့် ပေါင်းလူသန်း၆၀မျှနှင့်စခန်းသွားနေရသည်မှာ ရပ်တည်နေထိုင်ခက်ခဲခြင်းက သမိုင်းသက်သေဖြစ်သည်။ လူသားသည်ရေကြည်ရာမြက်နုရာကို ရွေ့ပြောင်းအခြေချပါသည်။ ဧရာ၀တီ။ချင်းတွင်း။စစ်‌တောင်း။သံလွင် မြစ်ဝှမ်းတို့နှင့် ရေကြည်မြက်နုသည်ဟူ၍ ရွေ့ပြောင်းအခြေချလာသူ လူဦးရေမျိုးပွားတိုးတက်မလာ။ ဘယ်ရောက်ကြွေလွင့်ကုန်သနည်း။ မြန်မာမြေသည် သိတတ်ခါစကထဲက ဘယ်သောအခါမျှ မအေးချမ်းခဲ့။ စစ်အင်အားနှင့်မဟုတ်မူပဲ ချစ်ကြည်စည်းလုံးညီညာသော စုစည်းခေတ်လည်းဘယ်တုံးကမှမရခဲ့။ ကြမ်းတမ်းသောရာသီဥတုကြောင့်လော။ လူလူချင်း အာဏာလု မြေလုစစ်ပွဲများကြောင့်လော။ ရောဂါကပ်ဘေးကြောင့်လော။ မာ/ပျော့- ပါတ်၀န်းကျင်/ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်းကြောင့်လော။ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ အတွေးအခေါ်ကြောင့်လောသုံးသပ်သင့်သည်။
မြန်မာ-အမေရိကန်တဦးဖြစ်သည့် အောင်လ(Burmese Python)သည် ကချင်တိုင်းရင်းသားတဦးဖြစ်ပါသည်။ စင်္ကာပူအခြေစိုက် One Championship ၏ပွဲများတွင် အထင်ရှားဆုံးဖိုက်တာတဦးအပြင် အကောင်းဆုံးချန်ပီယန်(များ)လည်းဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာ ၁၃ရက်ကထိုးသတ်ပွဲတွင် Brandon Vera ကိုအနိုင်ယူလိုက်သဖြင့် ဟဲဗီးဝိတ်တန်းပါချန်ပီယန်ဖြစ်လာသော သူသည် BBCအင်တာဗျူးတွင် “ကိုယ့်ဖာသာ ဆရာကြီးလို့ ထင်လို့ မရဘူး”ပြောခဲ့သည်။
တကယ်လည်း One Championship သည် MMA ပွဲများတင်ဆက်နေသည် အာရှတန်းဖြစ်၍ ကမ္ဘာတန်းအတွက် အနောက်နိုင်ငံများဆိုရမည့် ဥရောပနှင့်အမေရိကပွဲကြီးများစွာကျန်သေးသည်။
မည်သို့ဆိုစေ အောင်လသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမွေးဖွားသူဖြစ်သော်ငြား ဆယ်ကျော်သက်ကထဲကမြန်မာနိုင်ငံပြင်ပ အမေရိကားတွင်အခြေချနေထိုင်ပြီး မီချီဂန်ရှိ Andrewsတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရအမေရိကန်ရယ်ပါ။
သက်ထားသူဇာ (Burmese Feather)
၁၉၉၉ဖွား သက်ထားသူဇာသည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံဖွားဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်တံခွန်စိုက် ကြက်တောင်ရိုက်ချန်ပီယံဆုကို လေးကြိမ်ဆွတ်ခူးခဲ့ဖူးသူ ဖခင် နည်းပြအလုပ်ရရာ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အသက်၇နှစ်တွင် လိုက်ပါသွားပြီး စ, ကစားခဲ့သူဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံဘုရင်မင်းမြတ်က ပေးအပ်သော ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ၆ ဆုအထိ ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိကာ ထိုနှစ်တွင်ပင် လက်ရွေးစင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် သုံးကြိမ်ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် သူမ၏ကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ ၇၃ ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ တိုကျိုအိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဥ်ပြိုင်နိုင်ရန် ကိုယ့်စားရိပ်နှင့်ကိုယ် အစွမ်းကုန် ကြိုးစား‌နေသူဖြစ်သည်။
သိုင်းပေါင်းစုံတိုက်ခိုက်‌ရေးသမား အောင်လနှင့် ကြက်တောင်အားကစားမယ် သက်ထားသူဇာတို့သည် “ညီညွတ်ခြင်းသည် ရန်သူ”ဟု ယူဆထားကြသလားပင် ထင်ရလောက်သည့် မြန်မာတိုင်းရင်းသားအမျိုးစုံများနှင့် တပ်မတော်နှင့် ဒီချုပ်ပါတီသားများပင်တပြိုင်တည်းအားပေးကြသူများတည်း။ ရှာမှရှားပါပေ။
ထို၂ယောက်လုံး၏ထူးခြားချက်မှာ မြန်မာ့မြေခံပေါ်တွင် ကြီးပြင်းပညာသင် ဘဝဖြတ်သန်းခဲ့သူများမဟုတ်ခြင်းပါ။ သူတို့မြေခံမူလမှာ အမေရိကားနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပါသည်။
ကျန်ကမ္ဘာသိ စီးပွားရေးသမားများ။ ပညာရှင်များ နှင့်နိုင်ငံရေးသမားလည်းရှိကြပါ၏။ အနုပညာ-စာရေးဆရာတွင် ၀င်ဒီလောယုံ။ဒေါက်တာသန့်မြင့်ဦးတို့ရှိသလို သတင်းစာနယ်ဇင်းဆိုင်ရာ ပူလစ်ဇာဆုရှင်များဖြစ်သော အက်စ်သာထုဆန်။ ဝလုံးနှင့်ကျော်စိုးဦးတို့လည်း ကမ္ဘာတန်းအသိအမှတ်ပြုများပါပေ။ သို့သော်ကမ္ဘာလည်းလက်ခံ၊ မြန်မာ၌လည်း များတူညီမျှလက်ခံကားရှား၏။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဆင့်တွင် စာရေးဆရာအဖြစ်အောင်မြင်သော ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ်ဦးသန့်၏မြေး-ဒေါက်တာသန့်မြင့်ဦးသည်လည်း မြန်မာဇာတိနွယ်ဖြစ်ပါသည်။
အမေရိကနိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့တွင်မွေးဖွားကြီးပြင်းသောသူဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (YHT) ကို စတင်တည်ထောင်သူဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်နေကာ တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူတဦးလည်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ‌ကျော်စာအုပ်လေးအုပ်ရေးဖူးပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာကျော် Foreign Policy မဂ္ဂဇင်း၏ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတွေးခေါ်ရှင် ၁၀၀ စာရင်းဝင်နှင့် Prospect မဂ္ဂဇင်း၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့တွေးခေါ်ရှင် ၅၀ တွင်လည်းဖေါ်ပြခံရဖူးသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံးသော နိုဗယ်ဆုရှင်သည် ကမ္ဘာသိနိုင်ငံရေးသမားတဦးလည်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွေးဖွား၍ အိန္ဒိယ။အင်္ဂလန်တို့တွင် ဆယ်ကျော်သက်ဘဝဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။ အသက်၄၀ကျော်မှမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လာ နိုင်ငံရေးလုပ်သဖြင့် အကျယ်ချုပ်နှစ်ရှည်လများကျခံပြီးမှ သူမ၏ဦးဆောင်မှုဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် ၂၀၁၅တွင် မဲဖြင့်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရကာ အစိုးရဖွဲ့နိုင်ခဲ့သည်။ သူမမှာမူ ၅၉(စ)ဟူသော ခြေဥအပိုဒ်အရ သမ္မတမဖြစ်ရရှာပေ။ သို့နှင့် သမ္မတအဖြစ်တာ၀န်ယူတာဝန်ခံရခြင်း ကင်းလွတ်စွာဖြင့် တိုင်းပြည်ကိုအလုပ်အကျွေးပြုနေရပါသတည်း။
အကုန်သက်ရှိထင်ရှားရှိနေကာ မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြု၍ ကမ္ဘာတန်းယှဥ်ပြိုင်အောင်မြင်နေသူများရယ်ပါ။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားဖြစ်လျှက်နှင့်နိုင်ငံသားကို အလိုလိုပယ်ဖျက်ခံရသည့် (အခြေခံဥပဒေမဟုတ်သည့်) သာမာန်ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားဆုံးရှုံးကုန်သူတို့လည်း ပါ၏။ တင်းပြည့်နိုင်ငံသားဖြစ်လျှက်နှင့် အခွင့်အရေးကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ခံရခြင်းများပါသည်။ သို့သော် နိုင်ငံခြားနှင့်အဆက်အသွယ်ရသည်/ရှိသည်နှင့် ကမ္ဘာတန်းသိအောင်အောင်မြင်သွားသူချည်းတည်း။ လူမျိုးဇာတိဗီဇကြောင့်ကားမဟုတ်။ ဆယ်ကျော်သက်-တက်ချိန်ကောင်းတွင် မြန်မာ့ပညာရေးနှင့်အတွေးအခေါ်မှ လွတ်ပါသည်နှင့် “ဗြုန်း”ဆို ကမ္ဘာတန်းအဆင့်ခုန်‌ရောက်သွားသည်ကို တွေ့နိုင်မည်။
သို့ဆိုသော်.. အဆိုပါသူများကဲ့သို့ မြန်မာ့ရေခံမြေခံနှင့်လွတ်အောင်မရုန်းနိုင်/အခွင့်အရေးမရလျှင် အပေါ်တက်၍မရ‌အောင် မြန်မာ့ဆွဲချနှစ်အားတို့ကား ဘယ်အရာနည်း?
“သင်သည် ဘုရားလောင်းဖြစ်သည်။ မြင့်မြတ်သော လူသားဖြစ်သည်။ “
အမေရိကားသည် သမ္မတတဦးထဲ၏ဦးဆောင်စွမ်းဆောင်မှုဖြင့် ကမ္ဘာစူပါပါဝါနေရာယူထားခြင်းဖြစ်သလို အဆိုပါသမ္မတ၏ အတွေးမှားတချက်ဖြင့်ပင် တိုင်းပြည်သာမက ကမ္ဘာလည်းပျက်နိုင်ပါသည်။
မည်သည့် တင်းပြည့်အမေရိကန်မဆို သမ္မတဖြစ်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ပါလား။
မြန်မာတို့တွင်ကား ကြိုးစားကဘုရားဖြစ်နိုင်သည်ဆိုသဖြင့် မည်သူမဆိုဘုရားဆုပန်ခွင့်ရှိသော ဘုရားလောင်းများသာပါ။
အမျိုးသမီးထုအတွက်မူ ဗန်းမော်ဆရာတော်မှ သီလရှင်မယ်ကင်းအား ပြောလိုက်သကဲ့သို “ငါ့ပေါင်ကြားထဲကဟာ၊ နင့်ပေါင်ကြားထဲရောက်အောင် အရင် ဆုတောင်းဦး” ရှိနိုင်ပါသော်လည်း သေပြီးနောက်ဘဝကို အယုံအကြည်ရှိသော မြန်မာထေရာဝါဒသမားတို့အတွက်မူ ဂင်္ဂါဝါဠု သဲစုမကပွင့်လတံ့သော ဘုရားများတွင် သင်လည်းပါနိုင်/ဖြစ်နိုင်သည်ဟူလို။
တဦးချင်းစီက မူလအ‌တွေးအခေါ်ဟောင်းများကိုလွှင့်ပစ်ပြီး ရှင်သန်နေထိုင်ပါ။ ကိုင်တိုင်ကမရွေ့နိုင်လျှင်လည်း ကမ္ဘ့ာစာများကိုလှမ်းဖတ်ပါ။ အင်္ဂလိပ်စာ/ချိုင်းနီးစ်/ဂျပန်/ပြင်သစ်/စပန်းနစ် ဘာသာစကားမှန်သမျှ လေ့လာသင်ယူပါ။ တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ပါ။‌ ပြည်တွင်းနေသူအများစုအသံကို ပယ်ပါ။ ပြင်းပြင်းထန်ထန်အလုပ်လုပ်ပါ။
ကြိုးစားသူ/ပြင်းပြင်းထန်ထန်အလုပ်လုပ်သူ စွမ်းအားမြင့်သူတို့အတွက် တက်လမ်းတို့အမြဲပွင့်နေပါသည်။ ထင်ရှားပြောရလျှင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကနိုင်ငံသံရုံးမှ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နေမှုတခုဖြစ်သည့် မြန်မာလူမျိုးများကို မြေတောင်မြောက်လုပ်ရပ်တခုပါ။ သင့်ကို အမေရိကသံရုံးမှအရောက်လာရှာ၍ ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။ အမေရိကားပို့၍စွမ်းအားမြှင့်ပေးပါသည်။ အမေရိကား၏ လုပ်ထုံးပေါ်လစီတရပ်ပင်ဖြစ်နေသလားတော့မသိ၊ နှစ်စဥ်လုပ်/ ပို့နေသည်မှာ မြန်မာရာချီ၍ ဆယ်စုနှစ် ၂ခုမကရှိသည်ကိုတော့သတိပြုမိသည်။
တကယ်တော့ အမေရိကနိုင်ငံသည် သာမာန်ထက်ထူးသောသူများကို နိုင်ငံသားပေးပစ်သည်အထိ ဖွင့်ထားသော လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပေါ်လစီလည်းရှိသည်။ ‌O-1 Visa စနစ် မှာဤအတွက်ဖြစ်သည်။ ခေါင်းစဥ်မှာပင် O-1 Visa: Individuals with Extraordinary Ability or Achievementဟူ၏။ လူမကနတ်ထိစွမ်းသလော ။ နိုင်ငံသားအဖြစ်အလုံးစုံစောင့်ရှောက်ကာကွယ်မှုပေးပစ်သော အမေရိကနိုင်ငံသာ ယူအက်စ်စစ်ဒဇင်ဖြစ်စေနိုင်သည့် လဝကစနစ်ပါ။ ဤနည်းဖြင့် ကမ္ဘာတန်းအတော်ဆုံးများကို ရှာသည်။ နိုင်ငံသားပေး စည်းရုံးခေါ်သည်။ ပိုမိုအောင်မြင်သည့်လမ်းပေါ် တင်ပေးသည်။ အလွန်ထူးခြားသောစနစ်ကောင်းပါ။ သို့နှင့်အကောင်းဆုံးများရကာ အမေရိကပြည်ထောင်စုသည် ကမ္ဘာစူပါပါ၀ါနေရာကို ရာစုနှစ်ချီ ချိတ်တွယ်ထားနိုင်ပါသည်။
မြန်မာတို့ကား ပြောင်းပြန်။ ထူးခြားတော်လာသူ ကမ္ဘာတန်းခြေဆန့်နိုင်သူတို့ကို အားမပေး။ အားမပေးသည့်အပြင် ဦးနေ၀င်းစိတ်ကူးနှင့်ရေးထားသည့် ၈၂မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကို အတင်းအသက်သွင်းကာ တော်သူကိုကန်ထုတ်သည်။ နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုရုတ်သိမ်းပစ်သည်။ နိုင်ငံသားကို အဆင့်များထား ခွဲထုတ်သည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားထွက်အလုပ်လုပ်သူတို့ကို ခေတ်အဆက်ဆက် တိုင်းပြည်ခြေစုံကန်သည်။ ကျွန်ခံသည်။ စသဖြင့် အကြောင်းမျိုးစုပြနှိမ်သည်။ သို့သော် ထိုထိုသူတွေများ နိုင်ငံခြားမှ အသက်နှင့်ရင်းရှာဖွေပို့လိုက်ငွေများကိုကား မိသားစုလိုက်ထိုင်သုံးသတည်း။
ယခုမူ မြန်မာလူမျိုး ၁၀သန်းကျော်လည်း မြန်မာပြည်ပ နိုင်ငံခြား၍ ရုန်းကန်ရင်ဆိုင် အလုပ်လုပ်ကြပြီးရပ်တည်ကြရမည်။ အတွေးအ‌ခေါ်တို့ ရိပ်ရိပ်မျှ အပြောင်းကိုမြင်ကြရသည်။
“I think hard work. I believe in hard work.”
‌‌ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဂျပန်သတင်းဌာန Nikkei Asian Reviewနှင့်အင်တာဗျူးတွင် ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အချင်းနှင့်ပါတ်သက်၍အထက်ပါအတိုင်းပြောခဲ့သည်။
မှန်ပါသည်။ အသင်လူသားသည် လှုပ်နိုင်သမျှ အလုပ်လုပ်ရမည်။ ခေါင်းဆောင်လိုသူများပြင်းပြင်းထန်ထန်အလုပ်လုပ်ရမည်၊ နေရာအနှံ့လည်း သွားရမည်။
အလုပ်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေ။မဖြစ်သည်ဖြစ်စေ။ အရွေ့ရှိသည်ဖြစ်စေ။မရှိသည်ဖြစ်စေ အလုပ်လုပ်နေခြင်း-ပြင်းပြင်းထန်ထန်အလုပ်လုပ်နေခြင်းကသာ အဓိကဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆင်းရဲရခြင်းမှာ အလုပ်လုပ်သူနည်းခြင်းကြောင့်သာ။ စစ်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံပြာပုံဘ၀မှထစဥ်က ကလေး။လူအိုမကျန်လူတိုင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြရသည်။ အလုပ်လုပ်ကြရင်းအလုပ်ခွင်၌ပင်သေကုန်သူများလည်းရှိ၏။ ယခုချိုင်းနားနိုင်ငံသည်လည်း ချမ်းသာသောနိုင်ငံဘ၀ကို အလုပ်လုပ်ပြီး ရယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ အမေရိကန်တို့သည်လည်း ကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်းက အမျိုးသမီးများပါမကျန် စက်များနှင့်ပြိုင်အလုပ်ပြင်းထန်စွာလုပ်၍ ကမ္ဘာရှေ့တန်းနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွင်လည်း အမေရိကသမ္မတသည် ရုံးနှင့်အိမ်တွဲထားသော အိမ်ဖြူတော်၌နေ၍ နေညဟူမရှိအလုပ်လုပ်ရသဖြင့် သမ္မတသက်၈နှစ်ပြီးချိန်တွင် မျောက်အိုကဲသို့ရုပ်ကျသွားသည်ကို ထင်ရှားစွာမြင်နိုင်ပါသည်။
အလုပ်သည့်နောက်မှ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရည်ကပ်၍ပါလာမည်။ လူချင်းတူတူ စွမ်းဆောင်ရည်လွန်စွာကွာပါသည်။ တချို့တရက်လုပ်ရမည်အလုပ်ကို တချို့တနာရီလုပ်သည်။ အချို့ တနာရီလုပ်မှ ၁၀ခုပြီးသည်ကို တချို့ ၁၀မိနစ်နှင့် ၁၀၀ခုပြီးသွားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရင်းနှီးမြုတ်နှံမူများ မ၀င်လာရခြင်းအကြောင်းရင်းတခုပါ အဆိုပါ မြန်မာတို့၏ Capacity အလုပ်စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ မှတ်တမ်းများအရ အရှေ့တောင်အာရှတွင် မြန်မာတို့၏အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းရည်သည် ဗီယက်နမ်၊ဖိလစ်ပိုင်တို့နောက် အညံ့ဆုံးထဲပါလေသည်။
အမေရိကားတွင် လူ၏အလုပ်လုပ်စွမ်းရည်ကို လစာဖြင့်ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ အရင်ရှင်စနစ်တွေ ငွေကြေးသည်အရာအားလုံးအတွက် စံဖြစ်ရာ လူတို့၏အရည်အချင်းအရည်အသွေးကိုလည်း သိသာမြင်သာသဖြင့် တိုးတက်ခြင်းရောက်လေသည်။ မြန်မာတို့ငွေကြေးကို ရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်သည်ပင်ရှိသည်။ ဘာသာရေးအရလည်း ငွေကိုနှိပ်ကွပ်ထားရပေရာ ဆိုင်ရာသူတို့အရည်အချင်းလည်းမပေါ် စံထားပြစရာလည်းမရှိ ရှိလျှင်လည်း ဂမ္ဘီရဆန်သောစွမ်းဆောင်ရည်များ အသက်အရွယ်ကြီးခြင်း ၀ါ တို့သာဖြစ်တတ်သည်။ လောကီရေးအတွက် လုံးလုံးမှားပါသည်။ ငွေကို အရည်အချင်းဖြတ်ရာ စံအဖြစ်တန်ဖိုးထားပါ။
အလုပ်လုပ်ပါ။ ပျင်းမနေပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ပါ။ သင့်ခန္ဓာသုံး၍ ရွေ့ပါ။ လူကိုယ်တိုင်ကြီး Move ပါ။ Move Move!